in ku dhow 100 Qof oo ku dhimatay wax ka yar 2 Usbuuc Muqdisho. – Hornafrik Media Network
in ku dhow 100 Qof oo ku dhimatay wax ka yar 2 Usbuuc Muqdisho.
By HornAfrik	 Last updated Jun 23, 2017
Sagaal maalmood gudahoda waxaa muqdisho ka dhacay saddax weerar oo ismiidamin ah waxaa lagu dilay 51 qof oo shacab u badan,
14/bishaan waxaa rag hubeysan ay dagaal & weerar ismiidamin ah ay ku qadeen maqaayada pizza house, waxana werarkaas ku dhintay 29 qof oo dumar u badan,
20 bishaan waxaa weerar ismiidamin ah lagu qaday xarunta dagmada wadajir waxana ku dhintay weerarkaas 14 qof oo rayid u badan,
22 bishaan oo shalay ahayd waxaa weerar ismiidamin ah lagu qaday saldhiga booliska dagmada waabari waxaana weerarkaas ku dhintay 8 qof oo rayid u badan,
Wasaarada amniga oo wadooyin muhiim ah sababo amni u xirtay ayaa hada sugi la amniga caasimada waxana inta badan wadooyinka Muqdisho howl galo habeen & maalin ah ka wado Ciidamada Amaanka,
Sidoo Kale Waxaa Jira in Ciidamada Xasilinta Ay Shacabka Reer muqdisho Cabashooyin Kamuujinayaan Sababo la xiriira baaritaanada Aan micnaha Badan ku Fadhiyin Ee Wadooyinka Muqdisho,
Taliyaha Nabadsugidda, C/laahi Sambaloolshe ma lahan Khibrad Ciidan, marka laga reebo wax ka yar 2 Bilood oo uu Agaasime ka ahaa NISA, halka Taliyaha Gobalka Banaadir-na, Col Saadaq uu ka tirsan yahay Ciidamadda NISA 2 Sanno, isagoo ku soo biiray Xiligii uu Agaasimaha ahaa Sambaloolshe, mana uusan lahayn waqtigaas Darajo Ciidan, Laakiin wax ka yar 2 Sanno ayuu ku gaaray Darajadda Gaashaanle Sare,
isku soo Duub Ammaanka Muqdisho hadda Faraha ayuu ka baxay, Waxaana ku dhintay in ku dhow 100 Qof oo ku laba jibaaranta intii ku dhimatay ramadaankii hore Falal Argagixisanimo, Waxayna tani muujinaysaa in Ammaanku uu ka liito siduu ahaa Ramadaankii hore.
Madaxda Dawladda Somalia oo Niyad Wanaag badan muujiyay, isla markaana ay ka go’an tahay Xasilinta Amniga Muqdisho ayaa looga fadhiyaa inay qaadaan Tallaabooyin ay kula xisaabtamayaan Taliyayaasha Hay’adaha Ammaanka, si wax looga qabto Amni Daradda ku soo korortay Caasimadda Somalia.
Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyay shirka arrimaha Qaxootiga ee ka socda Kampala (Sawirro)
Howlgalka Mareykanka ee Somalia oo u Guuraya Muqdisho